IiOfisi zokuFudumeza ii-Eigday eNew York …….
I-Shenzhen Eigday Heating Limited ibhengeza ukuqala kwesebe elitsha eNew York, e-United States, ngokuhambelana neenqobo ezisemgangathweni zenkampani, "ukuqhubekeka kwezinto ezintsha kunye nokudala ixabiso". Eli nyathelo laqalwa ngokungqinelana necebo lenkampani, elijolise ekwandiseni ibhasi yasekhaya nakwamanye amazwe ...
Zithini iiMveliso eziShushu eziBhetri
Iimveliso ezishushu zebhetri zigcina umzimba wakho ushushu kwimozulu ebandayo. Phantse zonke iimveliso zokufudumeza zikaMSINDISI zinikwe amandla ebhetri kwaye zinokuphinda zisebenze, kwaye ubushushu bunokuhlengahlengiswa kubushushu obugqibeleleyo ngeqhosha lokutshintsha. Zisebenza njani iimveliso ezifudumeleyo? Zininzi iintlobo kwaye st ...
Yenza iigloves ezishushu
Ingumbono olungileyo ukuthenga iiglavu ezishushu kwimidlalo yangaphandle okanye ngesithuthuthu ekhwele kwimozulu ebandayo. Kodwa ngaba iigloves ezishushu ziluncedo? Abathengi abathengile iigloves zokufudumeza banezimvo ezixubeneyo malunga noku. Eyona mpikiswano inkulu kukungakwazi ukufudumeza imini yonke kwaye uluhlu lokufudumeza lwahlukile f ...